सूचना प्रविधि दिवसमा नेपाल टेलिकमको अफरैअफर
१७ बैशाख २०७९, शनिबार ४:३५
काठमाडौं । यही वैशाख १९ गतेमा मनाइने चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीका अनुसार सूचना प्रविधि दिवसका अवसरमा ग्राहकलाई अनलिमिटेड डाटा र भ्वाइससहितको कम्बो प्याक, डाटा प्याक र बोनस अन रिचार्ज उपलब्ध गराउने भएको हो ।
यो अफर वैशाख १८ देखि वैशाख २४ सम्म उपलब्ध हुनेछ । अफर अन्तर्गत ३ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने ६ जीबी डाटा प्याक जम्मा ९८ रुपैयाँमा मा खरिद गर्न सकिने छ । त्यसैगरी २४ घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिने एक एमबीपीएस अनलिमिटेड डाटा र अन नेट अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सकिने प्याकमा ५० प्रतिशत छुट हुने छ ।
यसअघि ९९ रुपैयाँमा उपलब्ध हुंदै आएको उक्त प्याक राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवसको अवसरमा ५० प्रतिशत छुटसहित जम्मा ४९ रुपैयाँमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसका लागि *1415*11# डायल गरी वा ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी सो सुविधा खरिद गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै २०० रुपैयाँदेखि ४९९ रुपैयाँसम्मको एमपोस रिचार्ज गर्दा दुई दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने १ जिबीको डाटा प्याक र ५०० रुपैयाँ तथा सोभन्दा बढीको एमपोस रिचार्ज गर्दा ४ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने २ जीबी डाटा प्याक पनि उपलब्ध गराइएको छ ।
टेलिकमद्वारा निर्वाचन अफर घोषणा, जेठ ४ गतेसम्म पाइनेछ यस्ता अफर
अर्को हप्तावाट देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने
टेलिकमले ई–सिम उपलब्ध गराउने, यसलाई कुन-कुन डिभाईसमा कसरी प्रयाेग गर्ने ?
यि प्याकेज सहित टेलिकमले ल्यायो ‘स्प्रिङ अफर’
भरतपुर अपडेटः ५३,४६२ मतगणना सकिँदा यस्तो छ गठबन्धन र एमालेको अवस्था
काठमाडौं अपडेटः बालेनले कटाए २६ हजार मत, केशव र सिर्जनाको कति ?
वीरगञ्ज अपडेटः गठबन्धनका राजेशमान सिंह ९ हजार बढी मतले अगाडी
ओलीको गृहपालिका दमकमा मतगणना अन्तिम चरणमा, राप्रपा जितकाे नजिक
६१७ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक : कुन दलले कति जिते ?
एमालेकाे गढ मानिएकाे भरतपुरकाे १० र ११ मा पनि रेनु अगाडी
काठमाडाैं अपडेटः बालेनले पाए २४६३३ मत, स्थापित ११६०० मतले पछाडि
शिवराजकाे मेयरमा राप्रपाका थापा विजयी
अछामको पञ्चदेवल विनायकमा कांग्रेसकी अम्बिका चलाउने विजयी
एमालेको पकड भएको पनौतीमा कांग्रेसको जित